‘महासचिवभन्दा तल्लो पदमा उठ्ने कुरै भएन’ - Sunaulo Nepal
मंसिर ३, २०७८ शुक्रवार ०९:२९ बजे
काठमाडैं । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीको आसन्न महाधिवेशन व्यवस्थापनको चटारो छ । मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुन गइरहेको एमालेको दसौं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको सह–संयोजक रहेका पाण्डेसँग महाधिवेशनको तयारी, पार्टीभित्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा र एमालले लिने भावी कार्यदिशाबारे पाण्डेसँग गरेको कुराकानीः
एमालेको दसौं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको सह–संयोजक हुनुहुन्छ, तयारी कस्तो छ ?
खाद्य र आवासको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । करिब दुई हजार कोठा, ३ हजार ५ सयदेखि चार हजार बेडहरू बुक भएका छन् । पाँच छाकको खाना हामीले व्यवस्था गछौँ । सौराहामा हुने हाम्रो बन्द सत्रमा जो जुन होटेलमा बस्ने व्यवस्था छ, त्यसै होटेलमा ब्रेकफास्ट र बेलुकीको खानाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
बिहानको खाना भने बन्दसत्रको हल भएको सेभेन स्टार होटल परिसरमा हुन्छ । मंसिर ११ गते बेलुकी चाहिँ अध्यक्षको तर्फबाट सबै प्रतिनिधिलाई निम्ता गरेर रात्रिभोजको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । त्यसो भएमा बन्दसत्रको हलमै वा प्रतिनिधि बसेकै होटलमा खानाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले सौरहामा हुने बन्द सत्रका लागि हल, डोम आदिको निर्माण काम पनि सुरु भएको छ ।
२०७७ फागुन २८ पछि पुनःस्थापित एमालेभित्रको परिवेश अहिले अलि फरक छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदा ताकाको माओवादी केन्द्रको एउटा समूह एमालेभित्रै छ, त्यसो त पार्टीभित्रकै विचार समूह पहिलेदेखि नै क्रियाशील छ। यसपटक पार्टीभित्र महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन निक्कै चर्किएला जस्तो देखिन्छ नि ?
अघिल्लो महाधिवेशनमा प्यानल–प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, यसपालि के हुन्छ ।
# दसौं महाधिवेशन